Vaovao - Fampidirana ireo plastika misy kilasy sakafo sasany
Fampidirana ny plastika misy kilasy sakafo sasany
Fanadihadiana momba ny fahalalana ara-pahasalamana amin'ny PP, PC, PS, tavoahangin-drano plastika Tritan
Ny tavoahangin-drano plastika dia hita na aiza na aiza amin'ny fiainana. Ny tavoahangin-drano plastika dia mahatohitra hianjera, mora entina ary tsara bika, koa betsaka ny olona misafidy tavoahangin-drano plastika rehefa mividy tavoahangin-drano. Raha ny marina, ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahalala ny akora tavoahangin-drano plastika, ary matetika tsy miraharaha ny fanasokajiana sy ny fiarovana ireo akora tavoahangin-drano, ary matetika tsy miraharaha ny fiarovana ny rano amin'ny tavoahangin-drano.
Fitaovana mahazatra amin'ny tavoahangin-drano plastika dia Tritan, plastika PP, plastika PC, plastika PS. PC dia polycarbonate, PP dia polypropylene, PS dia polystyrene, ary Tritan dia taranaka vaovao misy fitaovana copolyester.
PP dia iray amin'ireo fitaovana plastika azo antoka indrindra amin'izao fotoana izao. Izy io dia mahazaka hafanana ambony ary azo hafanaina amin'ny lafaoro misy microwave. Manana fanoherana hafanana tena tsara izy io, saingy tsy matanjaka, mora vaky ary ambany mangarahara.
Ny fitaovana PC dia misy bisphenol A, izay havoaka rehefa tratry ny hafanana. Ny fihinanana bisphenol A maharitra be dia be no hanimba ny fahasalaman'ny olombelona. Ny firenena sy ny faritra sasany dia nametra na nandrara ny PC.
PS fitaovana dia fitaovana amin'ny mangarahara faran'izay avo sy gloss ambony. Mora ny manonta, ary afaka miloko malalaka, tsy misy fofona, tsy misy tsiro, tsy misy poizina, ary tsy miteraka holatra. Noho izany, nanjary iray amin'ireo fitaovana plastika malaza kokoa izy io.
Ny mpanamboatra dia miatrika ny tsindry ny fiarovana ara-pahasalamana sy ny tontolo iainana ary mitady fitaovana afaka manolo ny PC.
Amin'ity sehatra eny an-tsena ity, Eastman any Etazonia dia namorona copolyester Tritan. Inona avy ireo tombony?
1. permeabilité tsara, transmittance hazavana> 90%, zavona <1%, miaraka amin'ny famirapiratana toy ny kristaly, noho izany ny tavoahangy Tritan dia mangarahara sy mazava toy ny fitaratra.
2. Raha ny fanoherana simika dia manana tombony tanteraka ny fitaovana Tritan, ka azo diovina sy diovina amin'ny detergents isan-karazany ny tavoahangy Tritan, ary tsy matahotra korontana izy ireo.
3. Tsy misy akora manimba ary mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fahasalamana; henjana tsara, tanjaka misy fiatraikany lehibe; fanoherana ny hafanana avo eo anelanelan'ny 94 ℃ -109 ℃.